Praiminisitra Mahafaly Olivier : “Nahavita ezaka maro ny governemanta” -
AccueilRaharaham-pirenenaPraiminisitra Mahafaly Olivier : “Nahavita ezaka maro ny governemanta”
29/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nisy ny fihaonan’ny Lehiben’ny governemanta, Praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier tamin’ireo mpanao gazety, omaly. Fotoana izay nanaovana ny tomban’ezaka vitan’ny Fitondrana. Nomarihany nandritra izany fa betsaka ny zava-bita ary betsaka ihany koa ny mbola miandry entina hanarenana ny firenena amin’ny laoniny. Teo amin’ny lafiny toe-karena izao, nambarany fa miverina sy miha-mafy orina ny fitokisana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena sy ny Fitondram-panjakana, indrindra eo amin’ny fiaraha-miombon’antoka ara-teknika. Porofon’izany ireo fanampiana ara-bola maro azo. Toy ny vola mitentina 174 tapitrisa dolara avy tamin’ny FMI, raha toa ka, 304 tapitrisa dolara ny fitambarany izay omena ato anatin’ny 2016-2019. Ny 10 tapitrisa avy tamin’ny CBI. Eo koa ny vola 110 tapitrisa Euros avy tamin’ny BEI sy 115 tapitrisa Euros avy tamin’ny Vondrona Eoropeanina. Teo ihany koa ny 411 tapitrisa dolara avy tamin’ny firenena japonay ary ny fanampiana ara-bola ireo vehivavy nataon’ny Banky iraisam-pirenena. Izay marihina fa saika fanomezana ny ankamaroan’ireo vola ireo. Izany rehetra izany, noho ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana sy ny fanajana ny tany tan-dalàna. Na eo aza anefa izany, nitsotra ny Praiminisitra fa tsy afa-po amin’ny zava-bitan’ny Fitondram-panjakana satria na niakatra 4,1 isan-jato aza ny harikarena faobe, tsikaritra fa mbola tsy mipaka amin’ny vahoaka Malagasy izany.
Fanamby goavana ho an’ny taona 2018
Fanamby lehibe kosa no hatrehan’ny Fitondrana ho amin’ny taona 2018. Isan’ny goavana amin’izany ny fanantanterahana ny fifidianana Filoham-pirenena. Mbola notsindrihan’ny Praiminisitra Lehiben’ny governemanta fa, “tsy maintsy atao amin’ny 2018 ny fifidianana. Ary andraikitra ny Filoham-pirenena no miteny zavatra sy manatsara izany mba tsy hisian’ny adilahy pôlitika eto amin’ny firenena, ka tandremo ny resaka tsaho.” Fanamby apetraka ihany koa ny fahasahiana manameloka ny tsy mety, toy ny kidnapping, fanondranana an-tsokosoko, ary “sahia mijoro raha misy mpitondra fanjakana manao tsy mety fa sahia ihany koa milaza zavatra tsara vita. Ka aoka hanana toe-tsaina madio amin’ny famahana ny olana eto Madagasikara” Ankoatr’izay, mahakasika ny tsy fandriampahalemana, nilaza ny Praiminisitra Mahafaly Olivier fa hitohizana ny fametrahana ny RSS ka any Bongolava no manaraka. Eo amin’ny lafiny fahasalamana kosa, hatsaraina ny kalitaon’ny tolotra omena, ary tafiditra amin’izany ny programa goavana dia ny rakotra ara-pahasalamana. Hanangana drafitra amin’ny ady amin’ny pesta ihany koa ny fanjakana. Eo amin’ny lafiny serasera kosa, hitohizana ny fandinihana ny lalàna mifehy ny serasera ka mba ho tompon’andraikitra amin’ny zavatra ataony ny tsirairay. Eo amin’ny lafiny toe-karena indray, hametraka drafitra vaovao hahafahana manarina ny Air Madagasikara ny fitondram-panjakana. Ary farany dia ny fametrahana ny “Haute Cour de Justice” izay tsy maintsy atao, hoy hatrany ny teniny.
“Fahombiazan’ny filoham-pirenena iray: Miankina amin’ny fahendren’ny vadiny”. Io no lohantenin’ny gazety Tia Tanindrazana omaly ary nasiana ny sarin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mivady. Naongan’ny vahoaka Filoham-pirenena telo no nirodana tamin’ny alalan’ny hetsi-bahoaka teto: Philibert Tsiranana (1972), ...Tohiny